General - Ngwa Ngwa | Akụrụngwa Akụkọ (Peeji 6)
Obere vidiyo, igwefoto igwe mara nke Google dị ugbu a na ere
Ka anyị hụ ihe Obere vidiyo bụ, igwefoto Google ọhụụ nke na-eji Artificial Intelligence were foto.
Facebook na-etinyekwa aka na egwuregwu vidio
Facebook ga - abanyekwa na ntanetị nke egwuregwu vidio. Chọpụta ihe banyere mkpebi ụlọ ọrụ na ihe kpatara ọ ga-eji banye na ngalaba a.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta akpụkpọ ụkwụ gị ma ọ bụ slippers gị n'ụlọ, nke a maara dị ka slippers, ha nọ na ...
Nyochaa nke Wiko Wim, ọnụ ahịa dị n'etiti etiti ọnụ ahịa mara ezigbo mma
Firmlọ ọrụ French na-enye anyị Wiko Wim, ọnụ ahịa dị n'etiti etiti nwere arụmọrụ na-anabata nke ọma na ego bara uru.
Akụkọ banyere nwanyị, site na Emmy na Golden Globe nke ọ chụrụ na ụdị eze nwanyị nke obere enyo, gosipụtara na ọ ga-enwe oge nke abụọ n'ime afọ a 2018.
Instagram na-ekpughe mgbe ikpeazụ ị jikọrọ ka ị nwee ike idozi ya
Instagram agbakwunyela atụmatụ ọhụrụ na mmelite ọhụụ. Ma ugbu a ọ ga-ekwe omume ịhụ ọkwa ọrụ nke kọntaktị gị ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ gị. Ma anyị na-akọwa otu esi gbanyụọ ya
Anyị na-enyocha SPC's Bang wireless wireless, ike na njikwa
Taa, anyị na-ewetara onye ọzọ n'ime usoro okwu ya, SPC Bang, ọkà okwu nwere oke oke na ike ị nwere ike idowe n'akụkụ ịchọrọ n'ụlọ gị.
Ebe ọ bụla na agbanyeghị ịchọrọ na Ear Earphones 6 Ezi Ikuku [Analysis]
Nọnyere anyị ma anyị nyochaa n'ụzọ zuru ezu Energy Earphones 6 Ezi Ikuku site na ụlọ ọrụ Alicante, ezigbo ihe ọzọ maka ngwaahịa dị oke ọnụ ma ọ bụchaghị mma.
Tag Heuer na-agbanwe smartwatche ya n'aka obere mkpịsị aka
Ihe ngosi nlekere Switzerland Tag Heuer gosipụtara n'ihu ọha Heuer ejikọtara 41, ihe nlere anya na mpempe ihuenyo nke 41 mm ma elekwasị anya na ndị niile nwere obere nkwojiaka.
Facebook na-amanye ndị mgbasa ozi na ụlọ ọrụ ịgafe igbe iji gosipụta ọdịnaya ha na netwọk mmekọrịta
Netwọk mmekọrịta Facebook ekwuputala na ọ ga-akwụsị igosipụta mbipụta nke mgbasa ozi na ụlọ ọrụ na nke mbụ iji dozie ọdịnaya nke ndị enyi na ezinụlọ, ebumnuche nke emere ọrụ a.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Lenovo nyere ogbako na CES ụnyaahụ banyere atụmatụ ụlọ ọrụ ya dị mkpụmkpụ na ozi ngwaahịa, taa ha na-ewetara anyị, na-enweghị ọkwa, ọhụụ ọhụrụ Glass C220, iko iko nke eziokwu dịwanye elu nke nwere ọgụgụ isi.
Sony chọrọ iju gị anya na ụda nke yiri ka ọ na-esi n'uko ụlọ, teknụzụ n'akụkụ anọ niile, ka anyị hụ ihe akụkọ ndị a nwere.
Jdị JBL, nke bụ akụkụ nke otu HARMAN International, nke dị n'aka Samsung, ka webatara ndị ọkà okwu okwu ọhụụ atọ batara iji dochie ndị bu ha ụzọ: JBL Clip 3, JBL GO 2 na JBL Xtreme 2
Ndị a bụ ndị ọhụrụ Sony Xperia XA2, XA2 Ultra na L2
Ndị otu mba Japan nke Sony egosila na CES mpaghara ọhụụ ọhụụ ọ ga-ebupụta n'ahịa n'ime afọ a: Xperia XA2, Xperia XA2 Ulta na Xperia L2
Guysmụ okorobịa ahụ sitere na Sony gosipụtarala telivishọn ọhụrụ dị elu maka 2018, lekwasịrị anya na gam akporo TV, teknụzụ HDR 10 na n'ezie usoro OLED.
ASUS dị na CES 2018. N'ebe ahụ, ọ gosipụtarala akara ọhụrụ ya nke obere kọmputa iji gboo mkpa niile
Taa, egwuregwu e-egwuregwu na-aga n'ihu na-enweta ala n'ụwa niile ma maka ihe a niile iji rụọ ọrụ, achọrọ ya ...
Firmlọ ọrụ Japan bụ Panasonic, gosipụtara onye nọchiri anya GH5, GH5S, yana ISO ruru 51.200 dị ka ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ ma e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-amata ngwa mbinye aka Elgato na ụwa teknụzụ. N'okwu a…
Ndị igwe jụrụ oyi agaghị agbanahụ ya, nke ahụ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ụdị ngwa a iji mepụta ụbọchị ha kwa ụbọchị, nke ahụ bụ ihe ThinQ na-abịa.
A na-ahọpụta NVIDIA dị ka onye ga-abụ nwa akwukwo ka ọ bụrụ etiti akwara nke ụgbọ ala kwụụrụ onwe ya ekele maka Xavier
N'iji ememe nke CES 2018 mee ihe, NVIDIA abịawo n'ihu iji gosipụta ikpo okwu ya na-atọ ụtọ maka ịkwọ ụgbọ ala kwụrụ ọtọ, nke ụlọ ọrụ taa dịka Volkswagen na UBER amalitela ịnwale.
Acer dị na LAs Vegas ebe a na-eme ngosi ngosi teknụzụ CES. N'afọ a, ọ werela ọtụtụ laptọọpụ niile masịrị
The iPhone X, kacha chọọ onyinye a Christmas
Mgbe anyị chere ọnwa ole na ole kemgbe mmalite ya na ahịa na mgbe anyị hụrụ ka anyị si anụ ihe ọma banyere iPhone X, ugbu a bụ oge kachasị mma iji zụta iPhone X.
Lyric T6R, anyị nwalere thermostat jikọrọ Honeywell
Lyric T6R, thermostat smart nke Honeywell na-eme ka onye ọ bụla nweta ya nke ahụ ga-enye gị ohere ịnweta nkasi obi ma chekwaa na ike oriri.
Companylọ ọrụ Korea bụ Samsung ka gosipụtara, ụbọchị ole na ole tupu ememme nke CES, ihe nyocha nke mbụ na QLED technology na njikọ Thunderbolt 3
Elon Musk hiere ụzọ tinye akara ekwentị ya na Twitter
Yabụ dị ka anyị na-ekwu, onye isi nke Tesla n'amaghị ama bipụtara nọmba ekwentị ya maka nso ...
Anyị na-enyocha ekweisi Newsxill Nix bluetooth gamers, ọ bụ ezie na ekele maka ntụgharị ha, enwere ike iji ha n'ọnọdụ ọ bụla
Nnukwu batrị Tesla na Australia na-egosi ikike ya
Igwe nnukwu batrị nke Elon Musk wụnyere na Australia, egosila na arụmọrụ ya site na ịmalite na naanị 140 ms mgbe egbusịrị ya
Onye Russia nwụrụ mgbe ọ na-ekpori ndụ n'eziokwu
Afọ 2016, bụ afọ nke ezigbo eziokwu mebere wee bụrụ ihe karịrị ...
Choputa ulo oru Energy Sistem Multiroom WiFi nke di elu, ihe ahia nke onu ahia nke € 130 na-enye anyi ezigbo uda di nma ma nwekwaa ike zuru oke iji ya.
Dị n'otu iOS na macOS? Echiche ahụ laghachiri na atụmatụ Apple
N'ezie, okwu a abughi ihe kacha mkpa na Cupertino, opekata mpe nke ahụ ka ha si mee ka a mara ya kemgbe oge ...
Anyị enyochachara ihe ngosi 27-inch nke Philips (276E7QDSW), mana anyị na-ewetara gị ozi ka mma, ọ nwere ike ịbụ nke gị naanị site na isonye na nnabata anyị.
Anyị na-enyocha ASUS ZenBook Pro, arụmọrụ na imewe na-aga aka na aka
Anyị na-anwale ASUS ZenBook Pro UX550VD ma anyị na-agwa gị ahụmịhe anyị, anyị ga-enyocha ya n'ụzọ zuru ezu.
Holife handheld cordless agụụ Cleaner nyochaa
N'oge a anyị nwere ohere ịnwale ngwaọrụ ọhụrụ maka ụlọ, Holife ejiri eriri igwe na-enweghị eriri, ...
Anyị na-enyocha Samsung MU6125 TV, 4K na HDR 10 na ọrụ nke etiti
Samsung MU6125, TV dị n'etiti na-eweta mkpebi 4K na HDR 10 atụmatụ na akpa niile, ka anyị gaa nyocha ahụ.
Nwere ike igbochi Mark Zuckerberg na Facebook
Ọ bụrụ na a nwara gị ọnwụnwa igbochi akaụntụ Mark Zuckerberg na Facebook, ị ga-ahụla otu ị ga - esi opekata mpe ruo ụbọchị ole na ole gara aga.
Nchịkọta ọhụrụ a sitere na SPC na mmekorita ya na El Dios De Los Tres sitere n'ike mmụọ nsọ nke ụlọ akwụkwọ ochie na ihe osise na-etinye agba agba.
Na Actualidad Gadget anyị agbadala ọrụ ma anyị ga-agwa gị gbasara ahụmịhe anyị na Amazon Fire TV Stick Basic Edition.
NASA kwuputara nchoputa nke uwa ohuru
Site na ojiji nke usoro ọgụgụ isi nke Google mere, NASA jisiri ike chọpụta ụwa ọhụrụ na kpakpando Draco.
Anyị na-eche ihu dị mma na usoro nke mpekere nke ụdị dị iche iche nke sistemụ arụmọrụ eji arụ ọrụ na ...
Companylọ ọrụ Cupertino ekpebiela ịzụta Shazam maka onye na-enyocha mbara igwe, ọ bụ ezie na o nweghị nnukwu dị ka echeburu.
AquaWeb bu sistemụ ohuru nke ndi okacha amara nwere ike inweta mmiri site na mmiri ozuzo na obughi iru mmiri na gburugburu ebe obibi.
Lyric C1 WiFi si Honeywell, nchekwa na ịtụ ahịa na ezigbo ego [Nyocha]
Anyị na-ewetara gị nyocha nke ngwaahịa ha ọzọ na-eme ka ụlọ gị bụrụ ebe dị nchebe ma marakwa mma, igwefoto Lyric C1 na njikọ WiFi.
Udilọ mgbapụ Audi na-eleta Madrid iji kwalite teknụzụ ụgbọ ala eletriki ya
Ọ bụrụ na ị jụọ anyị gbasara ụgbọ ala eletrik, Tesla ga-abata n'uche mbụ, ...
Dochọrọ gochọpụtacha ya na Akụkọ Instagram? Ọfọn, ugbua enwere ihe ngwọta maka ya. Anyị ga-agwa gị n'okpuru
Aukey LC-C1, Qi na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa maka ndị niile na-ege ntị [Onyinye Efu]
Oge a ka anyị ga-enyocha Aukey LC-C1, chaja chaja na-akwụ ụgwọ ọsọ ọsọ nke na-agaghị ahụ onye ọ bụla.
Anyị tụgharịrị ụda H501, 233621 na-akagbu ekweisi
Anyị na-aga ebe ahụ na nyocha miri emi na H501, ekweisi ekwe ntị nke China nke na-ekwe nkwa nkagbu ụda na ọnụahịa dị mma.
Afọ 2009: Twitter dị mkpa iji nwee ngwaọrụ raara onwe ya nye
Afọ 2009 bụ nnukwu ihe ịga nke ọma maka Twitter: ụlọ ọrụ ọbụna mepụtara ngwaọrụ naanị iji jikwaa netwọkụ mmekọrịta site na nkwụ nke aka
Akụkọ nke batara na Xiaomi banyere Black Friday mbụ ya na Spain. Ya mere na ...
Samsung nwere ike ịkwalite ngosi nke Samsung Galaxy S9 ya na ọnwa nke Jenụwarị. Iji kọwaa nke ọma, ebumnuche bụ igosi ya na CES 2018
Nweta Devolo 1200 +, PLC kacha mma na ahịa na onyinye a
Obi dị anyị ụtọ ịgwa gị na ị nwere ike nweta otu n'ime ngwaahịa ndị a dị oke egwu n'efu. Banye ma chọpụta otu.
Mee ọtụtụ ihe na Black Friday na-emekọ na-enweghị nduhie
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji onyinye ọ bụla na-atọ ụtọ n’oge Black Friday, ị kwesịrị itinye n’uche ụfọdụ ndụmọdụ ka ha ghara iduhie gị.
Traingbọ okporo ígwè nke ọdịnihu ga-enwe mgbatị ahụ, ime ụlọ egwuregwu vidio na mpaghara ọrụ
Ideenzug bụ oru ngo nke ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè German Deutsche Bahn, nke kachasị na mba ahụ. A na-achọ ụgbọ oloko nke ọdịnihu
Anyị na-enyocha ọkà okwu CSR, otu n'ime ihe kachasị mkpa nke AUKEY
Ka anyị lebakwuo anya na ọkà okwu CSR a nke Aukey na-enye anyị.
Welite ihuenyo laptọọpụ gị iji lekọta azụ na olu gị
Mụọ anyị otu esi emeziwanye ọnọdụ gị na ahụike gị site na ịrụ ọrụ na laptọọpụ na nyocha nke abụọ.
Ihu ID meriri site na nkpuchi
Companylọ ọrụ Vienamite Bkav jisiri ike ịgafe nchebe nke ID ID na iPhone X ekele maka iji ihe nkpuchi edere na teknụzụ 3D
SPC Smartee Sport, anyị nwalere ọnụ ala a, elele arụmọrụ dị elu
Nọnyere anyị ma lelee SPC Smartee Sport, smartwatch nke na-atụgharị isi.
Short video social network Musical.ly gbanwere ndị nwe ya $ 1.000 billion
A zụtala netwọk mmekọrịta maka vidiyo na egwu ruo sekọnd 15 n'ogologo maka ndị nọ n'afọ iri na ụma maka ijeri dollar 1.000.
YouTube na uzo agha iji mee ka Kidsmụaka YouTube bụrụ ebe dị nchebe
Nke a bụ otu YouTube si kpebie ịkwado ọdịnaya na-agbagha n'ime ụmụaka YouTube, na-eme ka ikpo okwu bụrụ ebe dị nchebe.
A na-ekpughere OnePlus 5T na nkwụsị ndị a
Mpaghara mbu nke OnePlus 5T dịworị na Twitter na Reddit, ka anyị leba anya na atụmatụ na imewe
Facebook gosipụtara mpaghara, ngwa mmemme ọhụụ
Foursquare na TripAdvisor bụ ngwa ndị nyeerela anyị aka ogologo oge iji jikwaa oge ezumike anyị mgbe anyị nọ ...
2018 nwere ike ịbụ afọ ikpeazụ nke Barcelona iji kwado MWC
Mtù MWC, GSMA, na-echegbu onwe ya banyere ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Barcelona na ọnwa ndị na-adịbeghị anya ma na-atụle ịhapụ Barcelona dị ka isi ụlọ ọrụ
Xiaomi Mi ọzọ na-esote na "notch" nke iPhone X?
Ma ọ bụ na maka ihe ha kpọrọ ya Apple Apple. Enwere ụfọdụ asịrị gburugburu netị na-agbasa ...
WhatsApp anaghị arụ ọrụ maka gị? Ọ bụghị naanị gị, WhatsApp dị ala
Ruo oge nke iri na atọ n'ime afọ, usoro izipu ozi WhatsApp akwụsịtụla ịrụ ọrụ nwa oge, na-ahapụ ọtụtụ nde ndị ọrụ na nzuzo
Tesla na obere awa, na nde ndị ọghọm na n'ihi nke ya Model 3
Tesla nwere nsogbu na ụdị kachasị mkpa ya: Tesla Model 3. Oge mmechi anaghị ezute ma na-edekọ nde dollar na mfu.
Anyị agaala PlayStation VR Psychiatric iji nwalee Ndidi ahụ, aha ụjọ nke mmụọ maka PS VR na ọ tụrụ anyị n'anya nke ukwuu.
Ihe niile Sony gosipụtara na Paris Games Week 2017
Anyị na-aga ebe ahụ na akụkọ sitere na Sony na Paris Games Week 2017, ebe Ikpeazụ nke Anyị: Nkebi nke Abụọ na ọhụụ ọhụrụ Farcry 5 na-enweghị obi abụọ.
Ahụmahụ Egwuregwu Madrid nyere anyị oge dị mma nke ntụrụndụ na ọtụtụ n'ime ihe omume emere yana ọdịnaya enyere
Sofia, bụ onye mbụ robot n'ụwa iji nweta ụmụ amaala si Saudi Arabia.
Nhọrọ echere ogologo oge nke na-enye anyị ohere ihichapụ ozi ndị ezitere site na WhatsApp dị ugbu a ma na-arụ ọrụ.
Xiaomi kwadoro nnabata ya na Spain
Onye Asia buru ibu Xiaomi ekwuputala site na Twitter na n'oge na-adịghị anya, ọ ga-emepe ụlọ ahịa anụ ahụ na Madrid ebe ọ ga-ere ngwaahịa ya ozugbo
A na-agbanwe usoro ntanetị nke Kalịnda Google site na iji ọhụụ ọhụrụ
Google emesiri megharia nhazi nke Kalịnda Google na nsụgharị weebụ ya na-emegharị ya na Ihe eji emepụta
Nyocha nke oru GP90: choputa ihe obula nke onye nyocha dika GP90 nwere ike inye, ihe nlere ahia karie nke oma.
Companylọ ọrụ Japan Casio ga-eweta na October 27, ọgbọ ọhụrụ nke GZE-1, igwefoto na-eguzogide ọgwụ maka ihe omume
BMlọ ọrụ BMW amalitela igwe ọhụrụ na enyemaka na-enyere aka: BMW Active Hybrid. Ọ nwere nnwere onwe dị ezigbo mma yana ezigbo mma ihe
Zhiyun Smooth-Q nyocha, gimbal maka smartphones na ese foto egwuregwu
N'oge a, Smartphone ọ bụla ma ọ bụ Mbadamba ụrọ nke ọkwa dị elu nwere ike ịdebe foto na vidiyo nke mma ...
Anyị na-enyocha Jaybird X3, isi egwuregwu blu Bluetooth ekweisi
Nchọpụta miri emi nke Jaybird X3, ekweisi ekwekọrịtara iji mee ka ị nwee ọ soundụ na ụda na egwuregwu nha anya.
Oasis mara mma, 'eReader' ohuru nwere ihe ngebichi na mmiri na-eguzogide ọgwụ
Amazon ewebatala nke ndị na - agụ akwụkwọ e-akwụkwọ kachasị ukwuu: Kindle Oasis. Ihe nlereanya a na-enye nnukwu ihuenyo na mmiri na-eguzogide
Twitter ga - agbakwunye atụmatụ 'Chekwa maka emesịa'
Twitter ga-amalite usoro ọhụrụ maka ntanetị mmekọrịta ya n'oge na-adịghị anya. Ọ bụ maka inwe ike ịchekwa tweets maka ịgụ ma emechaa
Etu esi aputa PDF iji weghara ohere
N'ihe banyere ịpịkọta faịlụ na PDF, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ, ụfọdụ akwụ ụgwọ na ndị ọzọ n'efu. Anyị na-egosi gị nhọrọ kacha mma.
Mgbasa ozi adịgboroja a na - akpọ Adblock Plus maka Chrome na - abanye na Chromelọ Ahịa Web Chrome
Mgbatị ọhụrụ n'okpuru aha Adblock Plus eruola ụlọ ahịa ndọtị Chrome, ndọtị na-abụghị nke mbụ
CAT na-enye akụkọ kachasị ọhụrụ banyere ekwentị ndị na-eguzogide ọgwụ, CAT S31 na S41, ekwe ntị na-eguzogide ọgwụ maka ndị na-achọ mmadụ.
Anyị nyochaa Wiko UPulse, mkpanaka nwere ezigbo igwefoto yana ọnụahịa dịtụ elu
Anyị na-enyocha Wiko UPulse, smartphone na gam akporo sitere na ụlọ ọrụ French nke na-enye otu igwe foto kachasị mma na nso ya
HP Spectre 13 na HP Specter x360, laptọọpụ ọhụrụ kachasị elu nwere oke mkpa
North HP HP amalitela akwụkwọ ọhụụ ọhụụ: HP Specter 13 na HP Specter x360, nke ikpeazụ bụ ụdị a na-agbanwe agbanwe.
Chọpụta ndị egwu egwu kachasị mma nke 11 maka Windows 10. Kedu ihe ọkpụkpọ kachasị mma iji gee egwu kachasị amasị gị? Chọpụta ya ebe a!
Nke a bụ otu Google si gosipụta Pixelbook, Pixel 2 na ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ n'ebumnuche nke ijikọ ahịa kachasị elu.
Anyị na-enyocha ihe dị ọnụ ala nke mkpofu robot maka ụlọ gị, Homgeek
Anotherbọchị ọzọ nyocha na Actualidad Gadget, anyị na-ewetara gị ihe ọzọ na Homgeek's Roomba, onye dị ọnụ ala na-ehichapụ robot na ahịa.
Akụkọ Instagram na-agbakwunye ohere ịme nyocha
Akụkọ Instagram na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ iji mee ka ndị na-eso ụzọ sonye: enwere ike itinye ntuli aka
PlayStation 4 weputara ngwa ngwa ya 5.0 na otutu ihe ohuru
Dị ka oge niile, anyị na-eweta ozi ọma na anyị ga-agwa gị ihe bụ ozi ọma na ụdị ọhụrụ a nke PlayStation 4 firmware na-ewetara anyị.
Anyị na-enyocha S-BOX, a na-acha ọcha-akpọ gam akporo TV Box nke ga-enwe ike ikwe ka ị rie ọdịnaya ebe niile, ka anyị gaa ebe ahụ.
Kedu ihe Ọka mmụta Google na otu esi eji ya
Ọ bụrụ n ’ejighị Google Ọzụzụ, anyị ga - egosi gị ihe ọ bụ, otu o si arụ ọrụ na ihe ejiri rụọ ọrụ Google a.
Na mwepụta nke ọhụrụ iPhone X na ọdịdị ihu ya iji kpọghee ngwaọrụ ahụ, ...
Ibe edokwubara m bụ ọrụ ọrụ nsonaazụ kachasị mma, mana taa anyị chọrọ ịnye gị ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị.